FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISpanish Intetho Yezandla YaseMerika Intetho Yezandla yaseBrazil Intetho Yezandla yaseChile Intetho Yezandla yaseMexico Intetho Yezandla yasePersi Intetho Yezandla yaseRashiya Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAcholi IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBashkir IsiBhulu IsiBulgarian IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiCreole saseHaiti IsiCreole saseSeychelles IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEstonia IsiFiji IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGreenland IsiGrike IsiGuarani IsiHausa IsiHiligaynon IsiHindi IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKinyarwanda IsiKorea IsiKrio IsiKwanyama IsiLatvia IsiLhukonzo IsiLithuania IsiLuganda IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMaya IsiNgesi IsiNorway IsiOssetia IsiPangasina IsiPhuthukezi IsiPolish IsiQuechua (saseAyacucho) IsiQuechua (saseBolivia) IsiQuechua (saseCuzco) IsiRashiya IsiRomania IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTajiki IsiTatar IsiTongan IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkmen IsiTzotzil IsiUkrainian IsiUrdu IsiUzbek IsiVietnam IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu
MAXA WAMBI uYehova wenza imimangaliso ukuze akhusele abo baselula nabangenakuzikhusela. Ukuba unokukhe nje uhambahambe emaphandleni ungayibona indlela uYehova akwenza ngayo oku. Kodwa usenokungakhawulezi ukuqonde oko kwenzekayo.
Ubona intaka ihlala ecaleni kwakho. Ibonakala yenzakele. Xa uzama ukusondela kuyo iphakamisa elinye lamaphiko ayo ize ihambe. Njengoko uyilandela, iyakushiya. Emva koko, ngesiquphe le ntaka iyabhabha. Iphiko layo belingenayo kwanto! Ngaba uyakwazi oko bekusenziwa yile ntaka?—
Kaloku, kufutshane nala matyholo uhamba ngakuwo, kulapho le ntaka ifihle khona amantshontsho ayo. Le ntaka ibisoyikisela ukuba uza kuwathatha uze uwenzakalise. Ngoko iye yazenza ngathi yenzakele ukuze ikususe kuloo ndawo ubukuyo. Ngaba uyazi ukuba ngubani onokusikhusela kanye njengale ntaka ikhusela amantshontsho?— EBhayibhileni, uYehova ufaniswa nentaka ekuthiwa lukhozi, ekhusela amantshontsho ayo.​—Duteronomi 32:11, 12.
Le ntaka iwakhusela njani amantshontsho ayo?
Oyena mntwana uxabisekileyo kuYehova nguNyana wakhe othandekayo, uYesu. Xa uYesu wayesezulwini, wayengumntu wokomoya onamandla kanye njengoYise. Wayekwazi ukuzinyamekela. Kodwa xa uYesu wazalwa njengomntwana emhlabeni, wayengakwazi ukuzinceda. Wayefuna ukukhuselwa.
Ukuze azalisekise ukuthanda kukaThixo ngaye emhlabeni, uYesu kwafuneka akhule aze abe yindoda efezekileyo nekhule yagqiba. Noko ke, uSathana wazama ukubulala uYesu ngaphambi kokuba yenzeke loo nto. Imigudu yokubulala uYesu esengumntwana nendlela uYehova awamkhusela ngayo libali elibangel’ umdla. Ngaba ungathanda ukuliva?—
Kwithutyana nje emva kokuzalwa kukaYesu, uSathana ubangela ukuba kubekho into engathi yinkwenkwezi esibhakabhakeni esiseMpuma. Amadoda abizwa ngokuba ngabavumisi ngeenkwenkwezi, ayayilandela le nkwenkwezi kangangamakhulukhulu eekhilomitha ukuya eYerusalem. Abuza indawo aza kuzalelwa kuyo lowo uza kuba ngukumkani wamaYuda. Kuthi kwakubuzwa amadoda anolwazi ngoko kuthethwa yiBhayibhile ngokuphathelele lo mbandela wona aphendule athi: “EBhetelehem.”​—Mateyu 2:1-6.
Xa abantu abavumisa ngeenkwenkwezi abebeye kubona uYesu bebuya, yintoni awabalumkisa ngayo uThixo neyabangela ukuba uYesu asinde?
Emva kokuba uHerode, ukumkani ongendawo waseYerusalem, evile ngokuzalwa kwalo kumkani mtsha kwidolophu engekude yaseBhetelehem, uthi kubavumisi ngeenkwenkwezi: ‘Hambani niye kumfuna umntwana nize nibuye nindixelele.’ Ngaba uyasazi isizathu sokuba uHerode afune ukwazi apho akhoyo uYesu?— Kungenxa yokuba uHerode unomona yaye ufuna ukumbulala!
UThixo umkhusela njani uNyana wakhe?— Kaloku, xa aba bavumisi ngeenkwenkwezi befika kuYesu, bamnika izipho. Kamva, ephupheni uThixo ulumkisa aba bavumisi ngeenkwenkwezi ukuba bangabuyeli kuHerode. Ngoko bagoduka ngenye indlela ngaphandle kokudlula eYerusalem. Akufumanisa ukuba aba bavumisi ngeenkwenkwezi bemkile, uHerode uba nomsindo gqitha. Ngoko ezama ukubulala uYesu, uHerode uyalela ukuba abulawe onke amakhwenkwe aseBhetelehem aneminyaka engaphantsi kwemibini ubudala! Kodwa ngelo xesha, uYesu wayesele emkile.
Ngaba uyazi ukuba usinda njani uYesu?— Emva kokuba aba bavumisi ngeenkwenkwezi begodukile, uYehova ulumkisa umyeni kaMariya, uYosefu, ukuba avuke aze abalekele eYiputa. Apho uYesu ukhuselekile kuHerode ongendawo. Kwiminyaka ethile kamva, xa uMariya noYosefu bebuya eYiputa kunye noYesu, uThixo uphinda amlumkise uYosefu. Umxelela ephupheni ukuba afudukele eNazarete, apho uYesu aza kukhuseleka khona.​—Mateyu 2:7-23.
UYesu oselusana waphinda wakhuselwa njani?
Ngaba uyayibona indlela uYehova amkhusela ngayo uNyana wakhe?— Ngubani obunokuthi ufana namantshontsho entaka afihlwe ngunina ematyholweni okanye ofana noYesu xa wayengumntwana? Ngaba wena akufani naye?— Kukho abantu abafuna ukukwenzakalisa nawe. Ngaba uyazi ukuba bangoobani?—
IBhayibhile ithi uSathana ufana nengonyama egqumayo efuna ukusitya. Yaye kanye njengokuba iingonyama zidla ngokukhetha izilwanyana ezincinane, naye uSathana needemon zakhe bakhetha abantwana. (1 Petros 5:8) Kodwa uYehova unamandla kunoSathana. UYehova unako ukubakhusela abantwana bakhe okanye aphelise nayo nayiphi na intlungu anokubazisela yona uSathana.
Ngaba uyakukhumbula oko iSahluko 10 sale ncwadi sithi uMtyholi needemon zakhe bafuna sikwenze?— Ewe, bazama ukusenza sibe neentlobano zesini athi uThixo ziphosakele. Kodwa, kuphela ngoobani abafanele babe neentlobano zesini?— Ewe, ngabantu ababini abakhulileyo besini esahlukileyo abatshatileyo.
Noko ke, okubuhlungu kukuba, abanye abantu abakhulileyo bathanda ukuba neentlobano zesini kunye nabantwana. Oko kusenokubangela ukuba amakhwenkwe namantombazana aqalise ukwenza izinto ezimbi azifunde kwabo bantu bakhulileyo. Kwakhona anokuqalisa ukusebenzisa amalungu awo esini ngendlela engafanelekanga. Oko koko kwenzekayo mandulo kwisixeko saseSodom. IBhayibhile ithi abantu balapho, ‘ukususela enkwenkweni ukusa kwindoda endala,’ babefuna ukuba neentlobano zesini namadoda awayetyelele uLote.​—Genesis 19:4, 5.
Ngoko kanye njengokuba kwakufuneka uYesu akhuselwe, nawe ufanelwe ukhuselwe kubantu abakhulileyo—nakwabanye abantwana—abasenokuzama ukuba neentlobano zesini kunye nawe. Ngokuqhelekileyo aba bantu basenokuzenza ngathi bangabahlobo bakho. Basenokude bakunike into ethile xa ubathembisa ukuba akunakuxelela mntu ngoko bafuna ukukwenza kuwe. Kodwa aba bantu bacingela iziqu zabo kuphela, njengoSathana needemon zakhe, yaye bafuna nje ukuzonwabisa. Ibe bazama ukufumana olu lonwabo ngokuba neentlobano zesini nabantwana. Oku kuphosakele gqitha!
Ngaba uyakwazi oko banokukwenza ukuze bazonwabise?— Kaloku, basenokuzama ukuphulula ilungu lakho lesini. Okanye basenokuzama ukukhuhla ilungu labo lesini kwelakho. Kodwa ufanele ungavumeli nabani na ukuba adlale ngelungu lakho lesini. Ungavumeli nomntakwenu, udadewenu, umama okanye utata wakho.
Ufanele uthini kwaye wenze ntoni xa umntu ezama ukubamba ngendlela engafanelekanga?
Unokuwukhusela njani umzimba wakho kubantu abenza izinto ezimbi ngolu hlobo?— Okokuqala, musa ukuvumela nabani na adlale ngelungu lakho lesini. Ukuba nabani uzama ukwenza loo nto, mxelele ngokuphandle ukhwaza, uthi: “Ndiyeke! Ndiza kukuxela!” Yaye ukuba loo mntu ukuxelela ukuba nguwe ombangele ukuba enze le nto, musa ukumkholelwa. Akuyonyaniso oko. Enoba ngubani na, hamba uye kumxela! Ufanele umxele enoba uthi oko akwenzayo kuyimfihlelo yenu nobabini. Kwanokuba loo mntu uthembisa ukukupha izinto ezintle okanye uyakoyikisa, ufanele umshiye, uhambe uye kumxela.
Akuyomfuneko ukuba woyike, kodwa ufanele ulumke. Xa abazali bakho bekulumkisa ngabantu okanye iindawo ezisenokuba yingozi kuwe, baphulaphule. Ukuba uyabaphulaphula, usenokusinda kubantu abangendawo abasenokukwenzakalisa.
Funda ngendlela yokuzikhusela kwizenzo zesini eziphosakeleyo, kwiGenesis 39:7-12; kwiMizekeliso 4:14-16; 14:15, 16; kweyoku-1 kwabaseKorinte 6:18 nakweyesi-2 kaPetros 2:14.
Khusela Abantwana Bakho